Madaxweynaha dowlada Puntland oo kala diray golahii deegaanka Gaalkacyo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha dowlada Puntland oo kala diray golahii deegaanka Gaalkacyo
July 4, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Golaha deegaanka degmada Gaalkacyo.
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Isniin ah kala diray golahii deegaanka degmada Gaalkacyo, sida uu sheegay afhayeenka madaxtooyada.
Afhayeenka madaxtooyada dowlada Puntland Cabdulaahi Maxamed Jaamac “Quraanjecel” oo saxaafada kula hadlay magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay in digreeto uu soo saaray Madaxweynaha lagu kala diray golihii deegaanka degmada Gaalkacyo.
Quraanjecel ayaa sheegay in Madaxweynaha uu si kumeel gaar ah ugu magacaabay duqa degmada Gaalkacyo Maxamuud Yaasiin Tumay.
Kala dirida ayaa imaanaysa kadib markii saddex qof oo katirsanaa dowlada lagu khaarajiyay magaalada Gaalkacyo intii lagu jiray bishii lasoo dhaafay.